Ciidamada Itoobiya oo rasaas ku furay dad rayid ah.
Wararkii: Aug 22, 2007
Qaar ka mid ah Beelaha ka qaybgalaya shirka oo sheegay haddii uusan Max’ed Dheere raagelin ka bixin hadalkii….
Dowladda Mareykanka oo looga digay in ay hawlgalka Soomaaliya u bedesho…..
C/llaahi Yuusuf “Hadalka Cali Geedi, anigu ma maqal laakiin hadduu jiro….”
Sheekh Cali Dheere “Mar keliya ayaa laga adimi doonaa Masaajidda khudbad keliyana waa laga akhrin Doonaa”
Xulka Qaranka Soomaaliya oo ku soo aaday xulka Swaziland is reeb-reebka Koobka Adduunka.
Waxaa maalintii shalay ahayd qarax lala beegsaday gaari ay lahaayeen Ciidamda Itoobiya, qaraxaas kadib ayaa ciidamada Itoobiya waxay fureen rasaas waxaana ku geeriyooday saddex qof oo ahaa dad rayid ah oo ka dhawaan goobta u qaraxu ka dhacay.
Dhacdadaan oo ka dhacday Suuqa Xoolaha ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in Ciidamada Itoobiya ay sdoo kale kaxeysteen dhowr kale, sidoo kale warar ayaa waxay sheegayaan in Ciidamada Itoobiya ay soo gaartay khasaare, waxayn dadka qaarkiis sheegeen in ay kaga dhinteen qaraxaasi ilaa iyo sadde askari, sidoo kale qarax ka dhacay agagaarka Warshadda Caanaha shalay subaxnimadii ayaa waxaa lala damacsanaa Gaari ay lahaayeen Ciidanka Dowladda Federaalka, balse qaraxaasi waxa uu qaraxaasi khasaare gaarsiyey dad rayid ah oo ka dhawaan goobta uu qaruxu ka dhacay.
Inkastoo ay weli ka socdaan Magaalada Mulqdisho qaraxyada lala beegsanayo ciidamada Dowladda iyo Kuwa Itoobiya, ayaa haddana waxaa socda hawlgalada ay Ciidamda Dowladdau ku baarayeen Magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah ergooyinka ka qaybgalaya shirka dib u heshiisinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay gudiga dib u heshiisiinta qaranka u gudbiyeen warqad qoraal ah oo ay kaga dalbanayaan in Max’ed Dheere uu si dhaqsi leh raagelin uga bixiyo hadalki dhawaan ka soo yeeray ee ahaa in dadka u qaxay inta u dhexeysa Siinka Dheere ilaa iyo Afgooey ay yihiin Agagixiso, waxayna ergooyinku ku tilmaameen warkaasi mid sii kala fogeynaya ummadda Soomaaliyeed.
“Waxaan ku jirnaa xili dib u heshiisiin ee ma aheyn in mas’uul u hadalkaas oo kale ku hadlo” ayay yiraahdeen ergooyinka ka qaybgalaya shirka oo sheegay in haddiisan usan Max’ed Dheere raagelin deg deg ah ka bixin ay dib ugu laaban doonan gobaladoodi.
Ergooyinka waxay kaloo sheegeen in hadalka ka soo yeeray Max’ed Dheere uu yahay mid burburinaya shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed, waayo ayay yiraahdeen, waxa uu ka hadlay waxyaabo Qatar gelin kara shirka dib u heshiisiinta.
Dhinaca kale odoyaal ka tirsan Beelaha ayaa iyagu waxa ay hadlka Max’ed Dheere ku tilmaameen mid aan u daneyneyn Ummadda Soomaaliyeed, waxayna yiraahdeen “In Ma’ed dheere uu dad ka qaxay dagaaladii Muqdisho ka dhacy uu ku tilmaamo argagixiso, balse waxay ahayd in uu soo booqdo dadkaasi, oo u soo ogaado xaaladooda, bal in ay yihin argagixisi iyo in kale”.
Iyadoo loo ololeynayo in hawgalka Soomaaliya uu noqdo mid hoos yimaada Qaramada Midoobey ayaa waxaa arrintaan si aad ah ugu ololeynaya dowladda Mareykanka oo dooneysa in ciidamo hoos taga Qaramada Midoobey loo diro Soomaaliya, maadaama ciidamadii laga sugayey Midowga AFrika ay ka baaqsadeen n ay Soomaaliya tagaan.
Dowladda Mareykanka ayaa waxay haatan kulamo la leedahay wadamo dhowr ah oo ay ka qalqaalineyso in Soomaaliya loo soo diro cidamo ka socda Qaramada Midoobey, hase yeeshee wadamo ay ka mid yihiin K/Afrika, Masar ayaa iyagu uga digay Dowladda Mareykanka in ciidamo ka tirsan Qaramada Midoobey loo diro Soomaaliya.
“Horey ayay Soomaaliya u soo aragtay Cidamo ka tirsan Qaramada Midoobey oo uu horkacayey Mareykanka, waana la ogaa wixii u ku dhamaaday hawlgalkaasi, waxaana ku dhintay kumanaan kun oo Soomaal ah” ayay yiraahdeen dalalkaani oo u soo jeediyey Dowladda Mareykanka in Soomaliya loo diro ciidamo ka tirsan.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa laga weydiiyey hadalka dhawaan ka soo yeeray Ra’isul Wasaare Cali Max’e Geedi ee ahaa in dowlddu ay sameyn doono Qad Cagaaran, waxa uuna yiri madaxweynuhu isaga oo hadalkasi ka jawaabaya “Anigu ma maqal, laakiin haddii uu jiro waa mid aan ka tarjumeyn siyaasadda Dowladda Federaalka”.
Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed waxa uu sheegay in arrintaasi ay sid ugu dhaqsiyaha badan uga wada hadali doonaan Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi, isagoo sheegay in Shacabka Soomaliyeed u baahan yihiin nabad balse aysan u baaneyn in dhibaato kale lagu sii siyaadiyo.
“Dowladda waxay la dagaalameysaa kuwa nabad diidka ah ee aan ogoleyn in dalka Dowlad ay ka jirto” ayuu yiri Madaxweyne C/llahi Yuusuf oo sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ka shaqeeyaan nabdda dowladdana ay ku gacan ku siiyaan.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda awqaafta iyo arrimaha ee Dowladda Federalka Diinta Sheekh Cali Maxmuud (Sheekh Cali Dheere) oo shalay shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waa uu sheegay in Dowladda ay sharciyo u soo saari doonto Masaajidda Dalka Soomaaliya, isagoo sheegay in dhawaan Masaajidda ay noqon doonaan kuwo dhan kasta iska socda.
“mar qura ayaa laga adimi doonaa, Sidoo kalana khudbadda Jimcaha ayaa Masaajidda laga wada akhrin doonaa mid khudbad isku mid ah” ayuu yiir Sheekh Cali Dheere oo sheegay in arintaan ay wasaaradda Aw-Qaafta iyo Arimaha Dinta uga danleedahay sidii loo mideyn lahaa masaajidda shacabkana khilaafka looga saari ahaa.
Mar la weydiiyey Sheekh in arrintaani wataan dowlado kale, ayaa waxa uu yiri “Waa wax caalamul Islaami ka jira, waayo wasaaradda arrimaha Diinta iyo Aw-Qaafta, waa in ay la socotaa xaaladda Masaajidda ku sugan yihiin
Kulankii saddexaad oo ay yeesheen xulka qaranka Soomaaliya
Kulankii saddexaad ayay xulka qaranka Soomaaliya maalinti shalay ahayd yeesheen waxayna la cayaareen xulka wadanka Tanzania oo iyana horey looga soo badiyey labo kulan oo ay yeesheen.
Cayaartaan oo ka tirsaneed tartanka Bariga yo Bartamaha AFrika ee da’doodu ka hooseyso 17-jirada, ayaa waxay xulka qaranka Soomaliya soo bandhigeen cayaar ay si aad ah u jecleysteen dadkii daawanayey, waxayna cayaartu ku soo gebagabowday waqtigii loogu talagalay barbaro 2-2, waxaana labada gool xulka soomaaliya u dhaliyey C/casiis Hoomey.
Kulanki ugu horeeyey xulka soomaaliya waxa uu la yeeshay xulka wadanka Rwanda, waaana xulka Somalia looga badiyey 2-0, sidoo kale waxay kulankii labaad la yeesheen xulka wadanka Burundi waxayna cayaartasn ku soo gebagabowday 6-0 oo looga badyey soomaaliya.
Waxaa la sameeyey isku aadka Koobka Adduunka ee 2010-ka oo ay martgelineyso wadanka K/AFrika, waxaana isku aadkaani uu ka dhacay xarunta CAF ee magaalada Qahira, waxayna Soomaliya ku soo began tahay xulka wadanka Swaziland.
Kulankaan oo noqon doona is arag hore iyo is-arag dambe ayaa waxaa is-araga hore ka dhici doona dalka Jabuuti, maadaama xiligaan Soomaaliya nabadgelyadeeda la isku haleyn Karin, waxayna cayaartasi dhiceysaa 12-ka October, kulanka labaadna waxa uu ka dhici doonaan dalka Swaziland bisha November.
Xulka Soomaaliya ayaa dhawaan la xuli doonaa, waxaana la magacaabi doonaa tababarayaashii laylin doona, iyadoo xulka Soomaliya looga baahan yahay diyaargarow adag, maadaama waxa uu haray tahay mudo 40 cisho ah.
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 22, 2007